गणतन्त्र कार्यान्वयन : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाविचको वार्ता - News20 Media
गणतन्त्र कार्यान्वयन : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाविचको वार्ता
June 7, 2021 June 7, 2021 N20LeaveaComment on गणतन्त्र कार्यान्वयन : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाविचको वार्ता
संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राती ११ वजे २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा ग-यो । संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो । अनी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिन भित्र राजदरवार खाली गर्न आदेश दिदै नारायणहिटीलाई संग्राहलय वनाउने निर्णय भयो ।
सरकारले गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता मोदराज डोटेलको संयोजकत्वमा पूर्व राजाको सुरक्षा प्रवन्ध वारे अध्ययन गर्न एउटा सुझाव कार्यदल वनाएको थियो । दरवारको सम्पत्ति मुल्याङकन तथा लगत संकलनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कुशुमको संयोजकत्वमा अर्को टोली बनेको थियो ।
दुवै समिति दरवार परिसर भित्र पुगे पनि कामको वातावरण थिएन । यस्तैमा एक दिन संयोजक कुशमले गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलासंग भने—मन्त्रीज्यू, सानो सानो कुरामा पनि दरवारका कर्मचारीवाट माथि जाहेर गर्नु पर्छ भन्ने जवाफ मात्र आउछ । राजनीतिक तहवाट सहज वातावरण नवनाउदासम्म काम गर्न गाह्रो हुने देखियो ।
सञ्चार माध्यममा पूर्व राजा दरवार छोड्न तयार भएनन् । नारायणहिटीवाट ट्रकका ट्रक अमुल्य सामान निर्मल निवास ओसारियो । दरवारमा महत्वपूर्ण कागजात जलाईयो । यी र यस्तै समाचार दिनहु जसो आइरहेका थिए ।
यही वातावरणका विच एक दिन विहान पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वाटरवाट प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार जादै गर्दा गृहमन्त्री सिटौलालाई लाग्यो—वजार हल्ला साम्य पार्न र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानसभाको निर्णय वारे यथाशक्य चाडो पूर्व राजाको चाहना वुझ्नु जरुरी भैसक्यो ।
वालुवाटार पुग्ने वित्तिकै उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग भने—गिरिजावावु संविधानसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि एक पटक पूर्व राजाको विचार वुझ्न भेटेरै कुरा गर्न जरुरी छ ।
कोइराला : अव के गर्ने त ? कसैलाई पठाउने कि के गर्ने ? कि तपाई जान सक्नु हुन्छ ?
सिटौला : तपाईले फोन गर्नु पर्छ पहिला । अनी म जान्छु ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल दरवारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई फोन गरे –गृहमन्त्रीजी आउदैहुनुहन्छ । उहाँलाई राजासंग भेटाउनु प-यो ।
कांग्रेसको गठबन्धन फुटाउन ओलीले फाले यस्तो जाल, माधव नेपालले के गर्लान् ?
आज दुःखद दिन, चितवनको बाँदरमुढेमा माओवादीले गराएको विद्युतीय धरापमा ३९ जनाले ज्यान गुमाएको दिन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली
संकटमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका दुवै हातमा लड्डु, यस्तो छ योजना
May 30, 2021 N20
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक, काङ्ग्रेसद्वारा बहिस्कार ।के के हुदैछ निर्णय हेर्नुहोस।
May 8, 2021 N20
एमालेबाट बाहिरिएका यी नेताले ओलीलाई डाउन गर्दै, असली एमाले माधबतिरै, ओलीतिर दादागिरीवाला